Akhriso Qisada Nin Soomaali Ah Oo Si Caddaalad Darro Ah Loogu Daldalay Britain | Berberatoday.com
Akhriso Qisada Nin Soomaali Ah Oo Si Caddaalad Darro Ah Loogu Daldalay Britain
January 29, 2019 - Written by Berbera Today
Hargeysa(Berberatoday.com)-Safia Maxamed, ayaa la yaabtay markii ay ogaatay in qofkii ugu danbeeyey ee lagu daldalo gobolka Wales, ee dalka Britain, uu ahaa Soomaali.
Inta badan Soomaalida Britain tegtay, ayaa halkaasi gaadhey wixii ka dambeeyay sanadka markii uu ahaa 1990-kii, Safiyana ma qiyaasi karin in Soomaalida ay halkaasi ku sugnayeen muddo gaadheysa boqol sano.
Sheekada ayaa bilawgeedu waxey aheyd wada sheekeysi kulan casho ah. Ma garan karo sida uu mawduucu u bilawday, ha yeeshee innagoo kasii baxeyna goobtii makhaayadda, saaxiibaday ayaa soo hadal qaadey magaca Maxamuud Mataan, kaas oo la daldaley sanadkii 1952-dii, markaa – anigu indhaheyga waxey ku dheegageen saaxiibadey, halkaas ayeynu ka amba qaadnay sheekadan qotada dheer, ee aadka u qalafsan – maxaa xiga markaa.
Markaan sii akhriyaba sheekada Mataan, waxaan ogaanay taariikhda dheer ee ay leeyihiin dadkayga ku nool Britain.
Markii aan ku soo dhex barbaarayey, qoysaska Soomaalida dhexdooda, kuwaas oo xooggoodu yimid halkan sanadihii sagaashameeyadii “1990-kii” illaa iyo labaddii kun “2000”, ma maqal qof soo hadal qaadaya in Soomaalidu joogeen in ka badan qarni, oo arrintaasi waxba kama ogayn.
Soomaaligii ugu horeeyey ee yimid Cardiff waxaa la diiwaan galiyey inta la og yahay qarnigii labaatanaad, xili danbe markii la furey Kanaalka Suez. Ha yeeshee way yaraayeen illaa iyo intii laga soo gaadhayey 1914-kii, markii uu bilawday dagaalkii koowaad ee dunida, waxaa kordhay baahida loo qabo dadka xoogga leh, si loogga faa’iideysto xooggooda shaqooyinka adeegga ku saleysan.
Raggani waxey ahaayeen dad reer guuraa ah, wax dhib ah kuma aysan qabin safarka ku saleysan guur guuridda. Waxaa jirta maah maah Soomaaliyeed oo odhaneysa “Nimaan dhul marin, dhaayo ma leh,”.
Raggii caddaanka ee shaqo doonka ahaa waxay weerar ku ekeeyeen dadkii madoobaa iyo guryihii ay ku noolaayeen, ayey tidhi Nadifa Maxamed, oo ah qoraa asal ahaan Soomaali ka soo jeedda balse British ah, taasoo ka shaqeyneysa sidii ay usoo saari laheyd buug ka hadlaya Maxamuud Mataan, “halka Soomaalidii, iyo madowgii kale ee ku dhaqnaa goobtii uu weerarku ka dhacay ay iska caabiyeen kuwii soo weerarey”. Waxaa muuqatey in weerarka kadib dadkii qaarkood ay isaga tagaan goobtaasi, laakiin kuwa kale ayaa ku hadhay goobtii, kuna adkeystay iney sidoodii usii noolaadaan, waloow shaqooyinkii la heli jirey ay hoos u dhaceen.
“Inkastoo ay noolashu adkayd, waxey halkaasi ka abuurteen noolol hor leh, taas oo ka dhalatay goobaha ay degganaayeen dadka dhaqamada kala duwan leh. Waxey sameysteen makhaayado, masaajido, iskuullo ku dhisan nidaamka Islaamiga ah, iyo hanaan ay isku garab qabtaan.
Maxamuud Mataan, ayaa Butetown gaadhay sanadkii 1940-kii. Wuxuu ku dhashey maammulkii Somaliland ee Britain hoostegi jiray ee sanadkii 1922-kii, isagoo raacayay raadka dadka kale ee bulashadiisa, ayuu helay shaqo markab.
Sanadkii 1945-tii waxey is barteen Laura Williams, oo aheyd gabadh 17 sano jir ah oo kasoo jeeda dooxada Rhondda, taas oo ka shaqeyneysay warshad sameysa warqadaha, saddex bilood kadibna wayba is guursadeen.
Labadan qof ee is calmadey waxey dhaleen saddex carruur ah, ha yeeshee waxaa aad ugu adkaaday iney helaan goob ay si wadajir ah ugu wada noolaadaan oo bulshaduna u ogoshahay. Markii uu dhacayay fal lagu dilay haweeney lagu magacaabi jiray Lily Volpert, qoysaskani ma wada noolayn.
Lily Volpert waxey ku jirtay da’da afartameeyada, waxay lahayd dukaan ku yaalla waddada Bute, kaasoo aan ka fogeyn xeebta ay ku xidhaan maraakiibta. Xilli fiid ah 6-dii March, 1952-dii, meydkeeda ayaa laga helay dukaanka, iyadoo dhiig baxday, oo qoorta loogga gooyey sakiin. Lacag lagu qiyaasay £100 oo haatan u dhiganta £3,000 – ayaa laga xaday dukaanka.
Qof u dhashay dalka Jamica, oo la yidhaahdo Harold Cover, ayaa siiyey booliiska warbixin aroortii xigtay, isagoo sheegay in uu arkey nin Soomaali ah oo kasii baxaya goobta uu falka dilka ka dhacay ee dukaanka Volpert – kaas oo lahaa ilig dahab ah, koofi iyo jaakatna aan xidhneyn.
Ha yeeshee Mataan ma uusan laheyn ilig dahab ah, dadkii arkay maalinkaasi, ka hor falka dilka, waxay sheegeen inuu xidhnaa koofiyad iyo jaakat. Waxaa dib laga ogaaday in ninka Jamaikan-ka markuu booliiska warbixin siinayey uu sidoo kale sheegay inuu arkey nin kale, kaas oo uu ku sifeeyey Taher Gass.
Booliiska qaarennadii difaacayay Mataan waxay ka qariyeen in afar qof oo goobta ku sugnayd marka uu dilka dhacayay ay dhamaantood sheegeen in Mataan aanay goobta ku arag, iyo weliba in gabadh 12 sano jir ah oo meesha joogtay ay sheegtay in Mataan aanu meesha tegin maalintaas.
Harold Cover, oo ahaa ninkii ku markhaati furay Mataan, ayaa muddo kadib la xidhey, isagoo lagu xukumay xabsi daa’in, ka dib markii lagu soo eedeeyey inuu isku dayey inuu gabadhiisa qoorta ka gooyo isagoo adeegsanaya sakiin, halka Taher Gass, oo ahaa isagana ninkii lagu tilmaamay inuu ku sugnaa dukaanka uu dilka ka dhacay, lagu soo oogay dambi ah inuu qof toorrey ku dilay, balse wax dambi waa lagu waayay.
Xaaskii Mataan, Laura, looma sheegin markii la dilayey ninkeedii, waxayna ogaatay mar ay booqatay xabsigii uu ku xidhnaa. Markaas kaddibna iyada waxaa u billawday dadaal sanado badan socday oo ahaa sidii ay ku caddeyn lahayd in ninkeeda uusan gelin dembiga loo daldalay.
Ugu danbeyntii xukunkii waa la buriyey sanadka markii uu ahaa 1998-dii. Lord Justice Rose ayaa ku tilmaamey kiiskani “mid ay caddahay inuu khaldanaa,” isagoo sheegay in ay meesha ka maqanayd wax cadeyn ah oo Mataan la xidhiidhinayay inuu isagu dilay Lily Volpert.